Ukwephula acinene ukuphefumula (lapho ekhaleni akusho ukuphefumula) isibaluli pathologies ezivamile, okuyinto ukuletha ukungakhululeki sina, ukunciphisa izinga lempilo, imbangela yezinkinga ezihlukahlukene. Ukushayisana ikhala acinene phambili ikhanda, sinusitis, rhinitis ezingamahlala khona polyposis, pharyngitis, snoring, vegetative-semithambo dystonia, ukucinana kwemigudu yokuphefumula okungamahlalakhona, ukukhathala, ukucindezeleka neurosis, izinkinga zobuchopho, ukubambezeleka kwengqondo izingane.
Ikakhulukazi ubuhlungu ukubheka ingane ubani engasaphefumuli ekhaleni. Indlela esiphatha ngayo amakhala yisisu ezinsaneni?
Uma ekhaleni akusho ukuphefumula ngesikhathi umntwana, khona-ke kufanele wageza nge isixazululo of chamomile, amanzi anosawoti - isipuni (noma ngaphansi) kasawoti inkomishi yamanzi ngalinye. Ukwenza inqubo, kufanele ushayele i-sopleotsos okugcwele injected ibe ikhala ingane. Clamping ikhala yesibili engalandeli ngokusebenzisa ke uyovela umlomo wombhobho. Ukumphatha phezu echibini kumele kubheke phansi (ayikwazi kwenziwe inqubo efanayo elele nengane yakhe emuva!). Uma amakhala yisisu ihlala isikhathi eside ukuba ngingcwabe isidingo ukusebenzisa esiliva Colloid noma Protargolum. Le ndlu uye umswakama ngokwanele kufanele kugcinwe.
Odokotela ukuchaza ukubonakala rhinitis kwezifo ezithathelwanayo (ezimweni eziningi). Ngakho, umzimba uzama ukuvimba ukusabalala ukutheleleka, ukukhulula isikhwehlela, okuyindawo ehlanganisa sebuningini igciwane zokuyithena izinto.
Umsebenzi oyinhloko, uma ikhala akusho uhogele rhinitis ezithathelwanayo, ukuvimbela omiswe we isikhwehlela. Ezimweni ezinjalo, isidingo kwadambisa humidified umoya ohlanzekile. Ingane kufanele njalo ukunikeza ukuphuza. Lapho esomile isikhwehlela ingane ngeke ukwazi ukusebenzisa ukuphefumula ekhaleni nomlomo ukuphefumula kuba. Ngenxa yalokho, amakhala yisisu kuzoholela ukuqina isikhwehlela futhi omiswe yayo up in the Isikhala sayo esingaphakathi ze- bronchi, okungase kube ukuqala ukucinana kwemigudu yokuphefumula noma i-pneumonia.
I elula kakhulu futhi ezingabizi izindlela ezisetshenziselwa ukulawula rhinitis, isixazululo evamile nosawoti, okuyinto amanzi nge kwalokho elincane usawoti. Uma izingane azinazo izimbobo zomoya ikhala, ungakwazi uwugqibe nale isixazululo nanoma yimuphi imvamisa, ujova ku ngamunye ikhala 3-4 amathonsi, ukweqisa izidakamizwa kufanele ungesabi.
Coryza, umntwana angakwazi nako ingelapheka usebenzisa ekteritsida, uketshezi oily nge eyethile magciwane senzo. Afakwe uwoyela kusho ungqimba elincanyana ukumboza mucosa kwekhala wengane, iphinde ivimbele omiswe. Ukubhekana ngosizo rhinitis uwoyela ngovaselina noma amafutha, noma isanda tocopherol noma retinol (vitamin E izixazululo oily noma A). Lezi zixazululo abangu injected 2 amathonsi zonke 2 h. Bangaphinde bahlanganise nge nosawoti. Zonke Kulezi zindlela ezingenhla, abanalo engemihle.
Izingane zabo ekhaleni engasaphefumuli ngenxa yezifo ezithathelwanayo, akudingekile ukuba izinto vasoconstrictor lehla (Nazol, galazolin, sonorinom, naftizina). Uma engasaphefumuli ekhaleni ngesikhathi ukhulelwe, impatho engcono efanelekayo, kanye ingane. Ikhala elivuzayo e ingane izodlulisa bebodwa, uma engakutholi ngendlela.
Acinene ukuphefumula kungase kube nzima ngezinye izizathu. Ukwephulwa zenzeka lapho okwandisa turbinates ngenxa nomzimba, vasomotor, rhinitis hypertrophic. Ukuphefumula luyindida lapho septum hlanhlatha at polyp, adenoids, sengozini ebuhlungu uMnyango ekhaleni zangaphandle.
Ezimweni ezinjalo, kudingeka ukwelashwa okuhlukile kakhulu. Otolaryngology olutheni ukubuyisela ukuphefumula acinene. Esimweni ngasinye, kungenzeka eyabelwe imithi yabo ngokuhlola ngazinye kudokotela. Ngakho, vasomotor rhinitis, okubangelwa kuye ekhaleni lehla, siqedwa ngu cauterization turbinates (submucosal cauterization), nge laser, argon plasma, radiowave ukuchayeka. septum ephambuka ukulungiswa kuphela lapho usukhulile ngokususa engaphelele izinsalela noma uqwanga. Nge inhlanganisela yakho kokubili izifo esibhedlela wenza kokungenela elihlangene ukulungisa lezi anomalies. polyposis acinene selashwe polipoetmoidotomii endoscopic onikeza uma ziqhathaniswa izindlela ezivamile (polytomy, laser ukuhwamuka) a nomphumela owaqhubeka isikhathi eside.
Into ebaluleke kakhulu ukuthi uyikhumbule - uma ikhona ukwephulwa acinene ukuphefumula kule ingane (kanye omdala), kufanele ufune ukunakekelwa kwezokwelashwa, kunokuba linqume ukwelashwa kuphela.
Ukwahlukanisa izinqubo (ngokuhambisana lezisekelo ezahlukene)
Kwakungobani amagama abaphostoli abangu-12 kaKristu?